नेकपा विवाद– प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्छन् यी ४ ‘कदम’ - Nepal Tale - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
प्रकाशित मिति : 2020-11-16
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारीकाबीच हिन्दू नेपालीहरु तिहारमा व्यस्त रहँदा सत्तारुढ दल नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद भने तात्दै गएको छ ।
गत शुक्रवार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि ‘गम्भीर’ आरोप लगाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवदेन पेश गरेपछि नेकपामा देखिएको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
गत भदौको अन्तिम साता सकिएको स्थायी कमिटी बैठले समाधान गरेको भनिएको नेकपाको विवाद कात्तिक नलाग्दै पुन: बढ्न थालेको थियो । यसबीचमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएका एक्ला–एक्लै वार्तामा ओलीले सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेको विषय पनि बाहिर आएको थियो । ओलीले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउन नमानेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले १ हप्ताको फरकमा २ पटक बहुमत सचिवालय सदस्यको ‘अनौपचारिक’ बैठक पनि बोलाए ।
अघिल्लो शुक्रबार प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मेलित अनौपचारिक बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको थियो । उक्त बैठकपछि पाँचै जना नेताहरुले ओलीलाई भेटेर सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति जनाउन लिखित रुपमै अनुरोध गरेका थिए ।
ओलीले पत्रमा अनुरोध गरिएजस्तै गरी बैठक बोलाउन सहमति त जनाएनन्, तर लिखित अनुरोध पत्रमार्फत नै जवाफ दिए । बहुमत सचिवालय सदस्यले आफुलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै ओलीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताबाट सरकारलाई असयोग भएको, गुटबन्दी गरेको तथा कार्यकारी अधिकार दिँदा पनि प्रचण्डले कुनै काम नगरेको आरोप लगाए ।
त्यसपछि प्रचण्डले पनि ओलीको पत्रको जवाफ पत्र मार्फत नै दिए । प्रचण्डले ओलीको पत्रको जवाफ मात्रै दिएनन्, आफुसहित बहुमत (५ जना सचिवालय सदस्य)ले ओलीलाई बैठक बोलाउन सहमति जनाउन अनुरोध गर्दै लेखेको पत्र, पत्रका सम्बन्धमा ओलीले दिएको जवाफ र ओलीको जवाफका सन्दर्भमा आफूले ओलीलाई लेखेको अर्को पत्र समेतको विषयलाई समेटेर कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा एक छुट्टै प्रस्ताव पेश गरे ।
‘ओलीमा गम्भी विचलन’ आएको लगायतका आरोपसहित प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेश गरेपछि ‘नेकपामा अब के हुन्छ ?’ भन्ने चासो नेपालको राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि प्रचण्डले पाँच जना सचिवालय सदस्यको सहमतिमा प्रतिवेदन ल्याएपछि बालुवाटारले त्यसको सामना गर्नेबारे छलफललाई तीब्रता दिएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका लागि बालुवाटार पुगेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सचिवालयमा प्रचण्डका तर्फबाट पेश भएको प्रस्तावमा आफूहरुको पनि योगदान भएको जवाफ ओलीलाई दिएका थिए ।
उनले ओलीसँग भनेका थिए, ‘प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव हामी सचिवालयका पाँचैजना कमेरेडहरु मिलेर तयार गरेका हौं, यसमा मेरोपनि योगदान छ । यो प्रचण्डले पेश गरे पनि यसमा प्रचण्डमात्र होइन, पाँचै जना संलग्न छौं ।’
शुक्रवारको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट आउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकटका नेताहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने बताइरहेका छन् ।
त्यसकै वातावरण मिलाउनका लागि उपाध्यक्ष गौतमको साथ बालुवाटारले खोजेको छ । शनिवार शितलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि वामदेवलाई विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएपछि उनलाई बालुवाटार बोलावट भएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, वामदेवलाई विश्वासमा लिएर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहलाई किनारा लगाउने ओलीको प्रयासले सफता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले वादेवलाई पार्टी अध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसहित चाहेको मन्त्रालयले दिने नयाँ प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ । तर नेता गौतमले भने ओलीका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव नआएको र आए पनि आफूलाई त्यस्तो चाहना नभएको बताएका छन् ।
वामदेवपछि ओलीले नेता नेपालसँग पनि आइवार नै बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले प्रचण्डले प्रस्तावमा आफूमाथि वाहियात र झुठा आरोपहरु लागएको र त्यसको जवाफ आफूले नदिने स्पष्ट पारेका थिए ।
महासचिव विष्णु पौडेललाई साथ राखेर नेता नेपालसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताएको स्रोतको दाबी छ । तर नेता नेपालले त्यसरी नभइ छलफल र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
ओलीले त्यसक्रममा नेता नेपालसँग आफूलाई सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै ओलीले आफू निकटका नेताहरुसँग पनि आगामी कदमबारे छलफल जारी राखेका छन् ।
सचिवालय वैठक मंसिर ३ गतेका लागि बोलाइएको छ र प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । त्यसैले उक्त बैठकबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराउने पहल ओलीले गरिरहेका छन् ।
पहिलो, आफूमाथि लगाइएका आरोपले भरिएको प्रस्तावलाई फिर्ता लिन प्रचण्डलाई बाध्यपार्ने पहिलो योजनामा बालुवाटार सक्रिय बनेको छ । जसका लागि वामदेव गौतमलाई फकाउने र उक्त प्रस्तावलाई फिर्ता लिन लगाउने प्रयास ओलीले गरेका छन् ।
दोस्रो, प्रस्ताव फिर्ता नहुने र मंसिर ३ गतेलाई बोलाइएको बैठक बस्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
तेस्रो, यो प्रस्तावका कारण ओली मात्र संकटमा भने छैनन् । स्वयं प्रस्ताव पेशकर्ता प्रचण्डपनि यसमा मुछिने छन् । प्रचण्डमाथि प्रस्ताव फिर्ता गराउने ओली प्रयास सफल भएमा प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर संकट आउने छ ।
चौथो, यो भनेको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद ओलीले त्याग गर्ने अवस्था हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसअघि उठाउने गरेको झैं ‘एक व्यक्ति, एक पद’को माग पुनः जोडतोडका साथ उठेको खण्डमा ओलीले नयाँ ‘अस्त्र’ प्रयोग गर्न सक्छन् ।
नेकपा विवाद: ओली पक्षका नेताहरुको आपत्ति किन ?
प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित : उच्च तहको भ्रमण गराइने प्रतिबद्धता
ओलीले २७ गते सचिवालय बैठक राख्ने आशा गर्दै सकियो धुम्बाराही बैठक
बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठकको मिति तोक्न गरेको माग ओलीद्वारा अस्वीकार
सचेतना अपनाएर पर्व मनाउन देउवाको आग्रह